mataano mid ah
Damalle Xagarre, 12 Mar 2014(Alldhooftinle.com)
Hooyo 28 jir ah oo la yiraahdo Urmila Sharma ayaa ku dhashay cisbitaal ku yaala magaalada Haryana ee dalka Hindiya gabadh laba madax leh. Dhakhaatiirta ayaa sheegay inay adag tahay in gabadhan yari mudo badan noolaato arimo badan oo caafimaadkeeda ka qaldan darteed. Dr.Shikha Malik oo ka waramaysa xaalada gabadha yar ayaa sheegtay in ay dadaali doonaan intii tamartooda ah laakiin aanay rajo badan ka qabin sii noolaanshaha gabadhan yar.
Gabadhan yar waxay leedahay labo madax iyo laba laf dhabar, inta kale jidhkeedu waa caadi. Ma dhici karto in qaliin lagu sameeyo waayo waxay leedahay jidh keliya ayay tiri Dr. Shikha. Arintan ayaa dhacda marka mataanuhu aanay si dhamaystiran u kala bixin, waxaana afka qalaad loo yaqaanaa conjoined twins, ama mataano mid ah, waxayna ku dhacaan 200,000 oo mataana ah markay dhashaan mid ka mid ah.
Qoyska dhalay gabadhan yar oo ah dad sabool ah ayaa ka werwersan nolosha gabadhooda, waxayna ka codsadeen in dadka iyo dowlada Hindiya ay ku taageeraan sidii gabadhoodu uga badbaadi lahayd dhibaatooyinka ku xeeran.
Bishii la soo dhaafay ayaa nin iyo xaaskiisa oo Australian ah waxay diideen inay soo ridaan ilmahooda uurka ku jira, kaasoo la sheegay inuu leeyahay laba madax iyo laba laf dhabar sidaa darteedna aanu noolaan kareyn. qoyskaas oo magacyadooda la yiraahdo Renee iyo Simon ayaa ku adkaystay in xitaa hadii nolosha ilmahoodu uu saacado keliya yahay ay doonayaan inay saacadaas la qaataan nolosha.
Arintan oo muran weyn ka dhalisay Australia ayaa hadda la sugayaa dhalashadii ilmahaas iyo inta Ilaahay cimrigiisa gaarsiiyo.
Shiikh Daarood Aljabarti